Mmalite | December 2019
Ndebanye aha na Mmalite
Mmalite na-enye dịgasị iche iche egwuregwu dị egwu site na EA na ndị mmekọ. Ma iji nweta ha ma nwee obi ụtọ usoro ahụ, ị ​​ga-edebanye aha mbụ. Usoro a abụghị ihe dị iche na ụdị ọrụ ndị ọzọ, ma ị kwesịrị ịkwụ ụgwọ nlezianya pụrụ iche maka isi ihe ụfọdụ. Uru nke ndebanye aha aha maka Nbido abughi nani ihe dị mkpa, kamakwa ụdị niile bara uru na bonuses.
Njikọ na ihe nkesa Sistem ma ọ bụrụ na ọ bụ njehie
Ọtụtụ mgbe, ị nwere ike izute nsogbu mgbe usoro mmemme enweghị ike ịntanetị, yana jikọọ na sava ya site na ya. N'otu oge ahụ, ọ na-emetụta Onye nwe ahịa. Ya onwe ya kwa, nwere ike "ṅụrịa" onye ọrụ ya mgbe ọ na-enweghị ike ijikọ na sava ahụ, ya mere enweghị ike ịrụ ọrụ.
Hichapụ egwuregwu ahụ na Mmalite
Ọ bụghị mgbe niile egwuregwu niile na Mmalite na-agba ume ma ọ bụ dị mkpa. Ọ nwere ike ịdị mkpa iji wepu otu ngwaahịa. Enwere ike inwe ọtụtụ narị ihe kpatara ya, mana ọ na-eme ka ha ghara ịtụle ha niile n'ọnọdụ a. Ọ ka mma ịtụle nhọrọ maka ewepu egwuregwu site na Mmalite. Ihichapụ na Mmalite Mmalite bụ onye nkesa na usoro dị n'otu maka egwuregwu na egwuregwu egwu.
Weghagharịa mgbanwe paswọọdụ
Paswọọdụ site na akaụntụ ọ bụla dị ezigbo mkpa, ozi nzuzo nke na-eme ka nchedo nke data nkeonwe. N'ezie, ọtụtụ ihe onwunwe na-akwado ike ịgbanwe paswọọdụ iji nye nchebe kachasị elu, dabere na ọchịchọ nke njide akaụntụ ahụ.
Nyefee ikikere netwọk ma ọ bụrụ na ọ bụ njehie
Ọtụtụ mgbe, usoro dị iche iche dị n'ịntanetị nke na-achọ ka ikike onye ọrụ na-aga ịnwụ na maka ihe dịgasị iche iche ịjụ ịkpọtụrụ ihe nkesa ahụ na ịnakwere data ndị ọrụ. Onye na-esite na mmalite abụghịkwa otu. Site n'oge ruo n'oge, enwere ike inwe nsogbu mgbe ị na-anwa ịnye ikikere usoro ihe omume ahụ na-enye njehie nnweta ma jụ ịrụ ọrụ.
Mmalite adịghị ahụ njikọ Ịntanetị
Imirikiti egwuregwu nke ụlọ ọrụ Electronic Arts na-arụ ọrụ naanị mgbe a na-ebido ha site n'aka Onye ahịa mbụ. Iji banye n'ime ngwa maka oge mbụ, ịkwesịrị ijikọ na netwọk (mgbe ahụ, ọ ga-ekwe omume ịrụ ọrụ na-anọghị n'ịntanetị). Ma, mgbe ụfọdụ, e nwere ọnọdụ mgbe njikọ ahụ dị ma rụọ ọrụ nke ọma, ma Amalite na-akọ na "ị ghaghị ịntanetị."
Gbanwee akaụntụ mail Oti
Taa, a na-eji e-mail eme ihe n'ọtụtụ oge na Intaneti n'oge ndebanye aha. Mmalite abụghị ụdị. Na ebe a, nakwa na ihe ndị ọzọ, ọ nwere ike ịdị mkpa ka ị gbanwee mail ahụ eziputara. N'ụzọ dị mma, ọrụ ahụ na-enye gị ohere ime nke a. E jikọtara E-mail na E-mail Ịntanetị na Akaụntụ mgbe ị na-edebanye aha ma jiri ya mee ihe dị ka nbanye.
Amalite crash fix mgbe imelite
Onye mmemme nwere iwu na-edeghị ede: Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, emetụla ya aka. Otú ọ dị, ọtụtụ mmemme ka chọrọ nhazigharị na nhazigharị, nke ọ na-emekarị ka ọ bụrụ nsogbu ọhụrụ. Otu ihe a na-emetụta Onye nwe ahịa. Ọtụtụ mgbe, ị nwere ike izute eziokwu ahụ bụ na mgbe imelite ọzọ melite ngwa ahụ akwụsị ọrụ.
Nweghachi ego maka egwuregwu ahụ na Mmalite
Ụfọdụ ịzụrụ na Mmalite nwere ike bụrụ ihe nkoropụ. E nwere ọtụtụ ihe kpatara ya - atụmanya na-enweghị atụ, arụ ọrụ na-adịghị mma, na ihe ndị ọzọ. Mgbe egwu gwụrụ, enwere ọchịchọ iwepụ ụdị ngwaahịa a. Ma ọ ga-adị mma iji dozie mwepụ dị mfe. Ọtụtụ oru ngo nke oge a dị oké ọnụ, ọnụahịa a nwere ike ị tụọ ọtụtụ puku rubles na ego a na-akwụ na-aghọ ihe ọchị.
Njehie njehie 196632: 0 na Mmalite
Ọ bụghị ndị ọrụ niile nwere ihe isi ike na-abanye n'ime Onye ahịa mbu. Ọtụtụ mgbe, ọ na-amalitekarị, ma mgbe ị na-agbalị ịnweta ya ịrụ ọrụ kpọmkwem, nsogbu na-ebili. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike izute "Error Amaghi Ama" n'okpuru koodu nọmba 196632: 0. Ọ bara uru karịa ịghọta ihe a ga-eme ya.
Gbanwee ma weghachi ajụjụ nzuzo ahụ na Mmalite
Mmalite na-eji usoro nchekwa nchebe na-ewu ewu site na otu ajụjụ nzuzo. Ọrụ ahụ chọrọ ịza ajụjụ na azịza n'oge ndebanye aha, ma emesia ọ na-eji ya iji chebe data njirimara. Ọ dị mma, dị ka ọtụtụ data ndị ọzọ, a pụrụ ịgbanwe ajụjụ na azịza nzuzo na uche gị. Iji okwu nzuzo eme ihe A na-eji usoro a iji chebe data nkeonwe site edezi.
Nbudata ọsọ ọsọ na Mmalite
Mmalite na-enye ọtụtụ ọnụ ọgụgụ kọmputa nke oge a. Ọtụtụ ihe omume ndị dị otú ahụ taa bụ nanị gigantic n'ịdị elu - ọrụ kachasị elu nke ndị isi ụlọ ọrụ ụwa nwere ike ịtụle 50-60 GB. Iji budata egwuregwu dị otú ahụ, ịchọrọ Ịntanetị dị oke mma, yana mgbali siri ike, ọ bụrụ na ị gaghị enwe ike ibudata ngwa ngwa.
Idozi nsogbu na mbido nke Agha 3 site na mmalite
Agha 3 bụ egwuregwu na-ewu ewu, ọ bụ ezie na ọtụtụ akụkụ ọhụrụ nke usoro a ma ama apụtawo. Otú ọ dị, site n'oge ruo n'oge, ndị egwuregwu na-eche eziokwu ahụ na onye omere a na-ajụ ịgba ọsọ. N'ọnọdụ ndị dị otú a, ọ bara uru iji nyochaa nsogbu ahụ ma chọpụta ihe ngwọta ya, kama ịnọdụ ala.
Omume ma ọ bụrụ na esiteghị na Mmalite
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwuregwu nile nke EA na ndị ya na ya kachasị nso chọrọ ka onye nwe ahịa na-abịa na kọntaktị iji soro ndị na-ekiri igwe ojii na ọdụ data nke profaịlụ. Otú ọ dị, ọ bụghị mgbe nile ka ọ ga-ekwe omume ịwụnye ọrụ ahịa. N'okwu a, n'ezie, enweghi ike ikwu banyere egwuregwu ọ bụla.
Mmegharị na mgbakwunye nke egwuregwu na Mmalite
N'agbanyeghị na e nwere ike ịzụta ọtụtụ egwuregwu site na EA na ndị mmekọ site na Mmalite, ọ bụghị ndị ọrụ niile na-eme nke ahụ. Ma nke a apụtaghị na ngwaahịa agaghịzi ejikọta na akaụntụ gị na ọrụ a. Iji mee nke a, ọ dị mkpa ịrụ ụfọdụ omume. Ejikwa egwuregwu na Mmalite Mmegharị nke egwuregwu na Mmalite bụ site na itinye koodu pụrụ iche.
Ngwọta nke njehie "Mmalite onye ahịa anaghị agba ọsọ" na mmalite nke egwuregwu ahụ
Mmalite abụghị naanị onye nkesa nke egwuregwu kọmputa, kamakwa onye ahịa maka mmemme ọsọ na ịhazi data. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwuregwu niile chọrọ ịmepụta site na onye ahịa nke ọrụ ahụ. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na a ga-eme usoro a n'enweghị nsogbu. Mgbe ụfọdụ, njehie nwere ike ịpụta na egwuregwu ahụ agaghị amalite, n'ihi na Onye nwe ahịa amaliteghị na-agba ọsọ.
Esi melite Mmalite
Ọ bụrụ na ịnweghị imelite Onye ahịa mbụ ahụ oge, ị nwere ike ịhụ mmemme ngwa ngwa ma ọ bụ ọbụna na ịjụ ịmalite. Ma na nke a, onye ọrụ ahụ agaghị enwe ike iji mmemme ndị chọrọ ịmalite site n'aka ndị ahịa. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya iji kwalite Mmalite nke nsụgharị ọhụrụ.